Welfare group helps South African township dogs | SanDiegoUnionTribune.comToday's PaperWeather 70º FTrafficSurfNewslettersSubscribe/LoginNews+Government & PoliticsElectionsCrime, Courts & FireWatchdogData WatchScience & EnvironmentHealthEducationImmigrationNationWorldBorder & BajaNorth CountyCommunitiesEducation MattersSports+ChargersNFLPadresMLBDel Mar Horse RacingGulls & NHLAztecsHigh School / PrepsChargers stadium TorerosGolfBusiness+BiotechEconomyE-commerceEnergy & Green Growth & DevelopmentReal EstateRetail and RestaurantsRetail & Small BusinessTechnologyTourismFinanceA&E+Comic-Con 2016Things To DoSan Diego County FairEventsMoviesMusicClassical MusicTheater & Performing ArtsVisual ArtsBooksDiscoverSDLifestyle+Visit San Diego PeopleHome & GardenMaking A DifferenceFood / CookingDining & DrinkingBeerTravelSan Diego Zoo SD Best PollEventsGuidesMilitary+MilitaryHonorDefenseOpinion+EditorialsCommentaryLetters to the EditorSteve BreenSteve Breen Caption ContestThe ConversationReaders' RepEndorsementsVideo+NewsSportsBusinessEntertainmentFeaturesWatchdogMilitaryMoreObitsObituariesPhotos & MemorialsFuneral HomesPlace an ObituaryFlowersGrief & SupportDeals & Classifieds+Daily DealsContestsClassifiedsGarage SalesMerchandisePetsServicesNewspaper AdsPlace an AdJobs+JobsEmployment NewsJob VideosEmployersPlace an AdHomes+Homes for SaleNew HomesRentalsOpen HomesCertified ServicesMortgagesCommunitiesMobile/ManufacturedPlace an Ad Cars+Sell Your CarBuy a CarFind a DealerPlace an AdNewsWelfare group helps South African township dogsBy SCHALK VAN ZUYDAM, Associated Press
| 6:32 a.m. Feb. 28, 2012
/ APShare Photo✉-✉⎙In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is caged at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is caged at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an unidentified pet owner leaves the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa ater his dog received treatment The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an unidentified pet owner leaves the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa ater his dog received treatment The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an unidentified dog owner carries his pet to the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an unidentified dog owner carries his pet to the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is operated on by veterinarian Brain Bergman at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is operated on by veterinarian Brain Bergman at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is examined by British volunteer veterinarian Gemma Driscoll, right, at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is examined by British volunteer veterinarian Gemma Driscoll, right, at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an unidentified pet owner offloads his dog at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an unidentified pet owner offloads his dog at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog awaits treatment at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog awaits treatment at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an anesthetized dog undergoes surgery at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, an anesthetized dog undergoes surgery at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is held in a cage while awaiting surgery at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog cares for it's puppies in a cage at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog cares for it's puppies in a cage at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal welfare clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is carried by a worker to undergo surgery at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)— AP+Read Caption
In this photo taken Friday, Feb. 24, 2012, a dog is carried by a worker to undergo surgery at the Mdzananda clinic, in the Khayelitsha township near Cape Town, South Africa. The Mdzananda animal clinic helps impoversihed residents take better care of their pets. (AP Photo/Schalk van Zuydam)
/ APShare Photo✉CAPE TOWN, South Africa  An animal welfare group is trying to help dog lovers in an impoverished South African township better care for their pets.